Ahlu-sunna iyo Dooxada Shabeelle oo guulo ka sheegtay dagaal xalay ka qarxay Beledweyn. – Radio Daljir
Baladwayne, March, 01 ? Wararka aynu ka helayno magaalada Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in saqdii dhexe ee xalay dagaal culus uu ka qarxay magaalada Baladwane, kaasi oo u dhaxeeya dhinacyada ciidamada Soomaalida oo kaashanaya Itoobiya iyo kooxda Al-shabaab.
Afhayeenka maamulka Dooxada Shabeelle Maxamed Nuur ?Cago-joof? oo waraysi siiyay radio Daljir ayaa shaaca ka qaaday in illaa 8 ruux ay ka dileen kooxda Al-shabaab, waxaase uu ka gaabsaday khasaaraha dhimasho ee dhankooda inuu ka warbixiyo.
Dhinaca kale, maamulka Ahlu-sunna ee magaalada Baladwayne ayaa dhankooda guul ka sheegtay dagaalkii xalay, waxaana waraysi uu siiyay radio Daljir wakiilka Ahlu-sunna ee gobolka Hiiraan Aadan Cabdulle Cawaale ku sheegay inay rag-badan uga dileen Al-shabaab dagaalkaasi.
Dhanka Kooxda Al-shabaab ma jirto illaa xilligaan cid u hadashay oo ka warbixisay dagaalladii Baladwayne, balse maamullada Dooxada Shabeelle iyo Ahlu-sunna ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan saamaynta uu ku yeeshay magaalada Baladwayne iyo shacabka ku dhaqan halkaasi.